Ny Alhambra any Granada dia manokatra ny Torre de la Pólvora amin'ny besinimaro amin'ny volana septambra | Vaovao momba ny dia
Maria | | Granada, About us
Sary | Ok diary
Tahaka ny efa fanaony hatramin'ny lohataona lasa teo, ny filankevi-pitantanan'ny Alhambra sy ny Generalife of Granada dia misokatra amin'ny besinimaro amin'ny fomba miavaka iray amin'ny habaka tsy miankina amin'ny Alhambra. Ireo izay nitsidika ny trano mimanda Nasrid volana maro lasa izay dia efa afaka nahita ny Torre de la Cautiva, ny Torre de los Picos ary ny Huertas del Generelife. Amin'ity indray mitoraka ity dia anjaran'ny Powder Tower izay hisokatra mandritra ny volana septambra.
Raha mikasa ny hiala any Granada ianao ary mikasa ny hitsidika an'i Alhambra mahafinaritra, dia manoro hevitra anao izahay hijery ity lahatsoratra manaraka ity izay hahitantsika ny tsiambaratelon'ny Torre de la Pólvora sy ny trano mimanda.
1 Inona ilay Powder Tower?
2 Toetra mampiavaka ny Tilikambo Powder
3 Ora fitsidihana ny Powder Tower
4 Mividiana tapakila ho an'ny Alhambra
5 Mahafantatra ny Alhambra any Granada
6 Avy aiza ny anarana hoe Alhambra?
Inona ilay Powder Tower?
Any amin'ny Alcazaba, atsimon'ny Torre de la Vela, no misy ny Torre de la Pólvora mivoaka avy amin'ny rindrina. Ity tilikambo mpiaro medieval kely ity dia nanana andraikitra lehibe tokoa tamin'ity fotoana ity teo amin'ny haavon'ny fifehezana ny faritany. Teo ambanin'ny Kristianisma dia nanjary sehatra artillery sy toerana fitahirizana an'ity fitaovana ity koa izy. Avy any no nahazoany anarana izay notehiriziny ankehitriny, Torre de la Pólvora, araka ny fanazavan'ny Birao ny Alhambra sy Generalife of Granada. Na izany aza, misy antontan-taratasy tamin'ny taonjato faha-XNUMX izay nantsoina hoe Torre de Cristóbal del Salto.
Toetra mampiavaka ny Tilikambo Powder
Tsy toy ny tilikambo hafa an'ny Alhambra any Granada, ny Torre de la Pólvora dia kely kokoa noho ny habeny. Na izany aza, nanana anjara asa tena lehibe izy io ary izany dia ny fifehezana ireo mpanafika izay niditra tao amin'ny lava-bato izay nisy teo am-potony. Araka ny hitanao, ny Powder Tower dia nanana sanda stratejika lehibe satria tany amin'ny farany avaratra-andrefana ary somary nandroso mifandraika amin'ny ambin'ny rindrina.
Eo akaikin'ny Torre de la Pólvora dia azonao atao ny mahita ny ampahan'ny rindrina mampifandray ny Alhambra any Granada amin'i Torres Bermejas.
Ora fitsidihana ny Powder Tower
Ny Powder Tower dia hisokatra ho an'ny mpitsidika amin'ny talata, alarobia, alakamisy ary alahady eo anelanelan'ny 8:30 maraina ka hatramin'ny 20:XNUMX alina. tamin'ny volana septambra. Voafetra ho an'ny olona 30 miaraka no nividy ilay tapakila Alhambra General na ny tapakilan'i Alhambra Jardines.
Ny Torre de la Pólvora dia maneho ny iray amin'ireo fananganana manokana ao amin'ilay trano mimanda ary ny volana septambra dia volana lavorary hahafantarana azy.
Mividiana tapakila ho an'ny Alhambra
Ny tapakila hitsidihana ny Alhambra any Granada dia azo vidiana amin'ny Internet, any amin'ny biraon'ny tapakilan'ilay tsangambato mihitsy, amin'ny alàlan'ny maso ivoho misahana ny fizahan-tany izay manana maso alàlana na an-tariby. Tokony hotadidinao fa raha ny fitsidihany marobe isan-taona dia tsy maintsy vidiana tapakila eo anelanelan'ny iray andro sy telo volana mialoha ny daty voafidy, saingy tsy azo vidiana amin'ny andro iray ihany izy ireo.
Raha fantatra amin'ny zavatra manerantany i Granada dia ho an'ny Alhambra. Izy io dia natsangana teo anelanelan'ny taonjato faha-1870 sy faha-XNUMX tamin'ny andron'ny fanjakan'ny Nasrid, ho trano mimanda sy tanàna palatine, na dia tranon'ny mpanjaka kristianina aza izany mandra-panambarana azy ho tsangambato tamin'ny XNUMX. Tamin'izany fomba izany, ny Alhambra dia nanjary mpizahatany manana ny maha-zava-dehibe azy ka natolotra ny Fahagagana Vaovao fito eran'izao tontolo izao aza.
Ny tena mahavariana momba ny Alhambra any Granada dia nandritra ny tantarany dia niova izy izay namela marika amin'ny zava-misy ankehitriny: iray amin'ireo tsangambato mahafinaritra indrindra any Espana izay nisafidy ny ho lasa fahagagana vaovao an'izao tontolo izao taona vitsivitsy lasa izay.
Izy io dia iray amin'ireo tsangambato Espaniôla be mpitsidika indrindra ary ny manintona azy dia tsy eo amin'ny haingo anatiny tsara tarehy fotsiny fa koa ny Alhambra dia trano iray izay mifangaro tanteraka amin'ny tontolo manodidina.
Avy aiza ny anarana hoe Alhambra?
Tsy isalasalana fa ny Alhambra dia mitana toerana manana tombontsoa, ​​izay mitambatra sy mifanaraka tsara amin'ny manodidina azy ny soatoavin'ny rafitr'izy ireo. Mba hankasitrahana bebe kokoa azy dia tsara ny mankany amin'ny faritra Albaicín (Mirador de San Nicolás) na Sacromonte.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tanànan'ny Espana » Granada » Ny Alhambra any Granada dia manokatra ny Torre de la Pólvora amin'ny besinimaro amin'ny volana septambra